Waxaan tijaabinay Clint FREYA dadka ku hadla Bluetooth | Wararka IPhone
Nacho | | Qalabka IPhone
Bixinta hadda ee kuwa ku hadla Bluetooth waa mid aad u ballaaran. Waxaa jira noocyo badan waana adag tahay in la doorto nooc gaar ah maadaama laga reebo kala duwanaanta naqshadeynta, dhammaantood waxay umuuqdaan inay na siinayaan wax isku mid ah iyagoon nooc shakhsiyadeed u gaar ah lahayn. Taasi kugu dhici mayso Clint FREYA, oo ah nooca sameecada Bluetooth-ka ah oo kaa yaabin doona laga bilaabo daqiiqada ugu horeysa waxaad maqleysaa iyaga.
Hadaad raadineyso a tayo leh hadalka Bluetooth, oo leh naqshad wanaagsan iyo in sidoo kale uu leeyahay batteri gudaha ah oo uu u qaado meel kasta, sii wad aqrinta dib u eegista Clint FREYA.
1 Clint FREYA, dareenka ugu horreeya
2 Tayada codka
3 Dhageyso muusikadaada meel kasta
Clint FREYA, dareenka ugu horreeya
Clint FREYA waa magaca loo bixiyay tan Iskeelka Bluetooth oo culeyskiisu yahay 1 Kg iyo 7W awood. Haa, waa hal ku hadla, inkasta oo dib u eegistayada aan marin u helnay labo cutub si aan ugu raaxeysanno khibrada riwaayadaha ah ee iibsashada labo FREYA ah ay keento.
Sanduuqa Clint FREYA kasta waxaan ka heli doonnaa:
1 Hadalka Bluetooth
1 fiilo gargaar ah oo ku saleysan xarka 3,5 mm
1 adabtarada korontada si aad ugu adeegsato Af-hayeenka meel caadi ah iyo inta uu ku shaqeynayo batteriga gudaha.
1 buug gacmeed
Markaan soo qaadanno Clint FREYA markii ugu horreysay, waxaan arki karnaa inaan wajaheyno wax soo saar tayo leh oo dhammaan faahfaahinta si taxaddar leh loo daryeelay ugu badnaan. Naqshadeedu waa dhululubid, qayb ballaaran oo dhinacyadeeduna ka kooban tahay shabakad dhibic leh oo dhexdeeda ah dhawaqa waxaa loo qaybiyaa jihooyin kala duwan, aad ayey muhiim u tahay si muusiggu u gaaro dhammaan geesaha qolka si siman.
Xagga sare waxaan ka helaynaa a rada aad u dareen leh taasi waxay naga caawin doontaa inaan xakameyno dib u soo celinta maqalka ee ka socota afhayeenka.
Ugu dambeyntiina, dhabarka dambe ayaan ku qiimeyn karnaa aqbasho aqbal, hal deked USB ah, badhan si loo waafajiyo mid kale oo u hadla Clint FREYA iyo korantada laga baxo.
Maaddaama aan ahay eey duug ah marka ay timaaddo kuwa ku hadla Bluetooth, waxaan dareemay in Clint FREYA ay aadayaan ku istaag heesaha leh nuxurka sare ee mawjadaha dhexdhexaadka ah iyo kuwa sare.
Waxaan ku lammaaneynaa hal Clint FREYA midkeena iPhone, riix ciyaarta oo xaqiiji waxyaabaha aan ka shakisanahay. Dhawaaqa ayaa sarkhaansan, Waxaan u maleynayaa inay yihiin kuwa ugu horeeya ee la qaadi karo iyo kuwa ku hadla Bluetooth-ka ee soo jiitay dareenkeyga markay tahay tayada codka. Dhamaan mowjadaha sifiican ayaa loo qiimeeyaa, waxay naga caawineysaa inaan ogaanno faahfaahinta hees kasta sida inaan ku dhageysaneyno dhagaha dhagaha leh oo tayo leh. Way soo jiitaan, runta.
Heerka baaska, Clint FREYAs waa taxaddar. Tan waxaan uga jeedaa in basku joogo laakiin ay ka go'an tahay a soo noqnoqoshada tayada hoose, qoto dheer u hurida ama xoog Laakiin ka taxaddar, ha iloobin in kani yahay kan hadlaya Bluetooth ee la qaadan karo sidaa darteed gaaritaanka tan waa guul. Ma jiraan wax dhalanrog ah, kaliya waa cod nadiif ah oo nadiif ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku raaxeysato muusikada aad jeceshahay sida aadan waligaa horay u sameyn.
Khibrada waxaa sii wanaajiyay iyadoo la isku geeyay cutub labaad by Clint FREYA. Afayeenka laftiisu wuxuu leeyahay farsamo uu ku sameeyo tan adoo adeegsanaya borotokoolka Bluetooth si loo gaaro codka dhawaaqa ah. Haddii aan ka faa'iideysanno muuqaalkan si wadajir ah iyadoo suurtagal ah inaan u adeegsanno iyada oo ay ku shaqeyneyso batroolkeeda gudaha ee 2.200 mAh, waxaan ku dhejin karnaa Clint FREYA kasta meeshii aan rabno, xitaa qolal kala duwan (illaa iyo inta aan ku dhex jirno inta u dhexeysa isku xirnaanta Bluetooth).
Shaki la'aan, sheegashada Clint FREYA waa tayada codkeeda waana inaynaan ilaawin inaan horjoogno kuwa hadla. Aynu dhinac iska dhigno fikirka beenta ah ee "mugga badan, ayaa ka sii fiican" maxaa yeelay waa qalad. Waxay la mid tahay inaad u iibsatid kamarad tiradeeda ah megapixels.
Dhageyso muusikadaada meel kasta
Clint FREYA waxaa loo isticmaali karaa adabtarada awoodeeda laakiin haddii aan rabno, baytarigeeda gudahiisa wuxuu na siin doonaa ismaamul ilaa 6 saacadood ah bilaa fiilooyin. Tani waxay siisaa ciyaar badan waana inaan ku dhejin karnaa kuwa ku hadla aagga guriga halkaas oo aan ugu adeegsan doonno laakiin daqiiqad gaar ah, waxaan u geyn karnaa jikada ama qolka jiifka.
Afka hore ee afhayeenka waxaa ku yaal saf afar ah Laydh cad oo tilmaami doona xaaladda batteriga markasta. Afayeenku wuxuu kaloo bixiyaa Ingiriisiga codka-kormeerka ah si uu noogu wargeliyo heerarka batteriga oo hooseeya.
Kuwani hadlaya waxay dhadhaminayaan dhadhan aad u wanaagsan afkayga. Waa markii iigu horeysay ee aan dhadhamiyo shey Clint runtiina waa, waa sumad aan rajeynayo inay xoojin doonto joogitaankeeda dhulka Yurub maxaa yeelay wax soo saarkoodu waa tayo iyo khatar, wax aan beryahan dambe aad loo arkin oo ay tahay inaan qiimeyno.
Immisa ayey ku kacayaan? 179 euro cutubkiiba.
Clint FREYA Afhayeenka
Borotokoolka Bluetooth wuxuu xaddidayaa baaxadda isticmaalka badan
Qiimo sare haddii aan dooneyno inaan ku raaxeysano codka rikoodhka ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Waxaan tijaabinay kuwa ku hadla Bluetooth-ka Clint FREYA, kama tagayaan adiga dan la'aan
TaiG waxay sii deyneysaa nooca 2.1.2 hagaajinta dhammaan dhibaatooyinka bilowga ah